AFT: miavaka, mampisaina ny kanton’i Clipse | NewsMada
AFT: miavaka, mampisaina ny kanton’i Clipse
Tena kanto ! Raha hafa ny anton-dia etsy amin’ny Alliance française (AFT) etsy Andavamamba ka sendra mahatazana ny santionany amin’ireo aranty ao amin’ny efitrano malalaka, inoana fa tsy hamonjy, avy hatrany, izay tokony haleha fa tsy maintsy hitady ny valin’ny fanontaniana, ao an-doha, hoe “… fa inona ity manintona be ity?”
Tsy inona akory ny hita ao amin’ny efitrano fampirantian’ny AFT fa ireo sanganasan’i Clipse, tovovavy malagasy, itoeran’ny talenta sy ny aingam-panahy ary, indrindra, ny nofinofy ny amin’ny hoavy mamirapiratra. Miavaka ny ranty, satria i Clipse no hany tovovavy malagasy havanana ary mahay miangaly ny sary an-drindrina na koa ireny karazana sary lehibe fanaon’ny tanora amin’ny rindrina ireny, tafiditra ao anatin’ny sokajin-kanto an-dalamba. Io ilay antsoin’ny vahiny hoe “graffiti”.
Hatramin’izay, miaraka hatrany amin’ny mozika rap ny ahafantarana ny “graffiti”. Fitaovana entin’ny tanora mitaky filaminana sy mitory firaisankina izy ireo. Mihoatra izany ny hafatra ampitain’i Clipse ato anatin’ity fampirantiana ity. « Demain n’est pas loin”, izay azo adika fanantenana, ny lohateniny.
Mahatsapa ireo olana marobe eny anivon’ny fiarahamonina ity mpanakanto ity ary mametra-panontaniana ny amin’ny ampitso sy ny hoavin’ny taranaka mifandimby. Isan’andro ny fiovana, saingy toa mihemotra ny fiainan’ny Malagasy, izay mitady ny hitazonany ny ainy sisa fa tsy miaina araka ny maha olombelona, vatana sy fanahy, azy.
Karazana antso na fanairana ny tsirairay ny amin’ny zava-mitranga eto amin’ity planeta ity ny ataon’i Clipse. Miankina amin’ny isam-batan’olona ny famolavolana hoavy tsara kokoa, mendrika ny maha olombelona. Tsy nataon’ity tovovavy manan-talenta ity latsa-danja ny fanehoana ny mahakanto ireo sanganasany aranty. Tsy miafina ny talentany sy ny traikefa maro efa ananany. Nanomboka ny 6 febroary teo ny fampirantiana ary mbola misokatra ho an’ireo tsy mbola nitsidika izany, hatramin’ny 22 febroary izao.